Kedu ụdị igwe igwe m chọrọ maka njem oyi? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Oge oyi na-agba ụgbọ anyị - olee otu anyị ga-esi edozi
Oge oyi na-agba ụgbọ anyị - olee otu anyị ga-esi edozi
Kedu ụdị igwe igwe m chọrọ maka njem oyi?
Agbanyeghi na nfe ihe eji eme ya, o nwere ike buru oke nma. Ebe ọ bụ na nke a bụ akwụkwọ ndenye ego * Akwụkwọ akụkọ Cyclocross, aeziebe ịmalite bụ site na cyclocrossigwe kwụ otu ebe. 'Obeanyịnya igwena-agbacha ọsọ ike, mana osisi ochie (na ụfọdụ ndị ọhụụ) wuru maka ọtụtụ ihe bụ aezidabara makaoyi na-aga.Jenụwarị 16 Dec 2019
Ya mere, anyị ga-aga ọrụ ụbọchị ise n’izuụka, ọ bụghị anyị bụ Chris? - Ee, anyị n’emere nke ahụ, ihe Dan na Sy na-ekwu. - Ee, anyị chọrọ ime ya site na igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị ya? - Ee, n’ihi na Dan na Sy gwara anyị na anyị na-ebu abụba. - Amaara m, enweghị m ike ikwere ya.
Ya mere, nke a bụ ndụmọdụ kacha elu oyi anyị na-eme. - Enwere ihe ole na ole ị ga-atụle, mana ọ bụ na ọ dịghị? - Enwere, ụkọ nke ọkụ, - ahụ erughị ala nke iyikwasị uwe ruru unyi nke ugboro abụọ.
Anyi ga eme ya, bia. - Ka anyị mee ya. Hey enyi, olee otú m si jiri akpa m? - You're ga-ebu laptọọpụ m. - Kedu? Nke ahụ abụghị azụmahịa ahụ. (Egwuru egwu egwu) - Ya mere, ka anyị malite site n'ịkwadebe igwe kwụ otu ebe.
Echere m na ihe kachasị mma bụ ịkwadebe abalị ahụ n'ihi na nke ahụ pụtara na ị gaghị agba ọsọ na-achọ ihe niile ị chọrọ n'ụtụtụ ma n'eziokwu ọ na-eme ka ịnya igwe kwụ otu ebe bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ. Chris, ị nwere ihe niile, enyi? - Ee, mara mma nke ukwuu. Ihe m na-ekwu bụ na enweghị m ike ịchọta wahoo m. (rie ude) - agwara m ya.
Mgbe ị na-ebugharị n’oge oyi, buru ihe ndị a n’obi: Mud. Oge oyi na-abụkarị mmiri na mmiri. Yabụ site na ịnọnyere ala, ị nwere ike idebe ihe mkpofu kachasị njọ n'aka gị, dị ọcha.
Ọkụ na ọnwụ sọ. Ọ bụghị naanị na ha kwesiri ịhụ ha, ha nwekwara ike hụ ka ha hụrụ ọkụ n’ọkụ gị. Iji bụrụ onye a na-ahụ anya ma nwee ike batrị zuru ezu, cialis dị oke mkpa maka ịgbagharị n'oge oyi.
Oge awa dị mkpirikpi na ọnọdụ onye nrọ na-egosi na ọhụhụ kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa. Taya, na-elele ha oge niile ma tụlee nhọrọ ndị a na-agba mgba na-adị nke agbakwunyere ndị na-egbochi nchebe mgbapu na ọnọdụ nke na-eme ka taya na-adịkarị mfe. Na-elekwasịkwa anya na nrụgide taya gị.
Na nchịkọta, ị kwesịrị idobe igwe kwụ otu ebe na ọnọdụ dị mma yana ọnọdụ zuru oke. Nke a ga - ezere nsogbu nke nrụzi n'akụkụ okporo ụzọ n'ọnọdụ ndị anaghị adịkarị mma. (Oti mkpu na-akụ) - Ugbu a, cheta ịtọ elekere mkpu ka ị nwee oge buru ibu iji gbanye mgbatị gị ma gbanyụọ igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị haveụ kọfị, gbaa mbọ hụ na ị nwekwara oge maka ya. (Grunts) (ọchị) - Naanị nkeji ise fọdụrụ. - Omume dị mma bụ ịkpachapụ anya igwe kwụ otu ebe, kamakwa ịkwadebe ihe niile ị na-eyi, uwe gị na abalị gị.
Echiche bụ ilekọta onwe gị anya. ịkwụsị ụtụtụ mgbe ụra na-atụtụ gị, ihichaa ma na-agagharị. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ị nwere okpu agha gị, uwe gị, sọks, iko gị.
Na-eme ka ihe niile na-agba ọsọ nke ọma n'ụtụtụ. (Doorbell) - Oh ebe ahụ ị bụ n'ikpeazụ. Kedu ihe ị na-eme? - Ndo enyi, abiam obere oge.
Otu iko tii ga-amasị gị? Anyị enweghị ike ịbịa n’azụ oge. Maara ihe Dan na Sy oge ikpeazụ anyị gosipụtara mgbe anyị gosipụtara n'oge.- Ọ dị mma, m bụ sekọnd abụọ, ihe niile m ga - eme bụ ijide okpu agha m. - Arhazi njem gị na enyi gị n'ọdịnihu ga-eme njem gị ọ dịkarịrị gị mfe karị yana yana enyere gị aka ịrapara na atụmatụ ahụ.
N'ihi na ị bụghị nanị ịhapụ onwe gị n'okpukpe, ọ bụghị James ọzọ? Onye ọ bụla.-Fine, ka anyị gaa.-Ọ bụrụ na oyi na-atụ gị gburugburu, ị nwere ike tụlee obere ụlọ ọkụ maka gị Ọ bụrụ na ọ bụ ya, yabụ kedu kọfị ma ọ bụ tii na-ekpo ọkụ na thermos, ọ bụghị ihe ọhụrụ ihe ọ drinksụ drinksụ iji kpoo n'ime ọkara elekere ka ọnọdụ okpomọkụ na-ada na thermos nwere ike inyere aka mee ka ihe niile dị iche maka gị.- Ihe ọzọ ịchọrọ iche bụ uwe gị, ọ bụghị naanị n'ihi na ha bara uru, na-adịgide adịgide, dị mma ma na-ekpo ọkụ , kamakwa ka a na-ahụ gị anya.- Ee, ma ị nwere ike ime nke a site na gị onwe gị bulie onwe gị elu - tinye ọkụ na uwe ma ọ bụ ọbụlagodi na okpu agha ma ọ bụ na akwa. - Dịka ọmụmaatụ, kedu maka ntụgharị na-atụgharị uche na igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụ na mgbochi mmiri gị? Nke a ga - enyere gị aka ịhụ ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ nwere nnukwu ọkụ. - Ee, nke ahụ bụ igodo. - Eeh.
Mgbe ọ na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe, ịnwe ọtụtụ uwe ọrụ na ebe ọrụ bụ ebe dị mma ịmalite. N’ụzọ ahụ, ịkwesighi iburu ha n’akpa azu ma ezigbo ego bụ ime obere igwe kitin na-agba ịnyịnya ebe ahụ, n’ihi na ọ bụrụ n ’ị ruru unyi ma sie mmiri n’elu njem gị n’ụtụtụ, ọ dịghị ihe dị njọ karịa iwere nke abụọ otu maka ịnyịnya n'ụlọ Ma mgbe ụfọdụ, ọbụna yi uwe na tebụl gị ka i wee nweta ihe ị ga-eri mgbe gị na-agba ịnyịnya na ị merie Ekwela ụbọchị gị site na-eto eto afo. (ọkụ jazz music) Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya.
Ndụmọdụ anyị kachasị elu maka ịkwagharị n'oge oyi. Abụ m, enyi. - Kedu? Kedu ihe ị chere? - Ọfọn, ebe a ka m bi.
Aga m ahụ gị, ị nwere kilomita 45 ịga, nri? - Eeh. - you chọrọ laptọọpụ gị? - Ee e, ị nwere ike ilekọta nke ahụ, agaghị m adọkpụrụ ihe a n'ụlọ. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka wee lelee ụfọdụ ederede ndị ọzọ na-aga ebe ahụ.
Ọ ga-akara m mma ịla tupu nri abalị emee oyi. (rie ume)
Ọ dị mma ịgba ịnyịnya ígwè n'oge oyi?
Oge oyiịgba ígwè nwere ike ịbụ ihe siri ike naanyịnya igwe, ọ bụ ezie. (Jide n'aka na ị ga-anwale nrụgide taya na mgbụsị akwụkwọ, yabụ na ị naghị agbanwe ụlọ dị n'etitioyi.) Ọzọkwa, gbalịa na-agba ọsọ ndị widest taya na i nwere ike dabara na gịigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ntakịrị traction na ọnọdụ oyi, tụlee itinye ego na taya taya abụọ.Ọkt 30 2020
Ndewo, a bụ m Ben na taa achọrọ m ịgwa gị banyere otu nnukwu iwe m mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè na oh nke ahụ bụ anụ ọhịa wolf n'ebe ahụ Awe, enweghị m mbugharị.
Ọ bụ kpam kpam coyote. Enwere m ike iri m. Nke ahụ bụ ihe nkoropụ, ma
Ndewo, a bụ m Ben ma taa anyị na-ekwu maka otu nnukwu iwe m dị ka frostbiker ma ọ bụ onye na-agba oyi. Ya mere, m na-eji igwe kwụ otu ebe aga njem kwa ụbọchị. Enwere m edemede ole na ole na ya ị nwere ike pịa ebe a chere, ọ nọ ebe a ka ọ bụ ebe a? Aga m mepụta maapụ ị nwere ike pịa maka ederede ọzọ ebe m na-ekwu maka etu m siri gbaa igwe kilomita 10,000 na igwe e-bike a.
Otu n’ime ihe ndị kacha akpasu m iwe mgbe m gwara ndị mmadụ okwu ma kwuo na m na-agba ịnyịnya ígwè m n’oge oyi bụ na ha nwere mgbagwoju anya - ha asị, “Chere gịnị?! ọ bụ Canada, kedu ka ị si agba ịnyịnya igwe n'oge oyi? 'na ihe bụ: ọ bụghị oyi ahụ. O doro anya, Anaghị m eyi mkpuchi ugbu a. M hụrụ coyote n’ebe ahụ.
Ya mere echere m, 'Lee, ọzọ coyote!' Isenowo: Naanị m furu efu ya. Ọ bụ echiche na-ezighi ezi na ịgba ígwè n'oge oyi bụ naanị mba Canada ọ bụ ezie na n'eziokwu, anaghị m ekpuchi mkpuchi taa.
ụfụfụ ala spain
Ọ bụ ihe nzuzu na ọ dị oke ọkụ n’èzí, ọ dị asaa, enweela ụbọchị ole na ole dịka nke a. N'izu gara aga, enwere ụbọchị ole na ole oyi na-atụ, ha dị ka mwepu 21 ma ọ bụ nwee mmetụta dị ka mwepu 21. M ka na-agba ịnyịnya ígwè m ụbọchị ndị ahụ, mana ọ bụrụ na ị bụ 'onye na-agba ịnyịnya nkịtị' ị nwere ike ị gaghị agba igwe ụbọchị ndị ahụ, mana ọ bụ Disemba 22 taa chere, nri? Eeh, obu ekeresimesi n'ime ubochi ato ma lee m, m adighi-eyi okpu ma dika
Echere m na ndị mmadụ na-eche na ọbụlagodi na Canada ọ gaghị ekwe omume ịgba ịnyịnya ígwè n'ihi na ọ na-adịkarị oyi ma ọ na-ada snow mgbe niile na ọ na-adị apịtị mgbe niile na ọ gaghị ekwe omume mgbe ọ bụ n'eziokwu ọ bụ ọtụtụ ụbọchị. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ dị ka mwepu 10 ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ bụghị oyi mgbe anyịnya igwe! Na-ekpo ọkụ ngwa ngwa site na ịpụ ụkwụ ka m wee nwee onye na-enyere m aka n'ịnyịnya ígwè m na nke ahụ na-enye m ohere ịhazi ụfọdụ ụbọchị mgbe m na-eche, 'Achọghị m ịpụ n'elu akwa' m ka nwere ike ịpụ nke bed na enwere ike ịtụkwasikwu m obi ike na injin m yana ọ na-arụ ọrụ, mana ọ naghị enye m ohere ịnwe ụgbọ ala nke abụọ.
Ya mere enyi m nwanyị nwere otu ụgbọ ala ahụ, ọ naghịkwa n'obodo, n'ihi ya, m tụkwasịrị ya obi. Ana m akwọ ụgbọala na ime obodo - ọ bụ ya mere m ji nọrọ n'okporo ụzọ a - na ee, ọ bụghị snow kpuchiri n'okporo ámá niile. Achọrọ m ikpuchi ya: ọtụtụ mmadụ chere na m na-akwọ ụgbọala site na snow kwa ụbọchị, mana njem m na-agakarị n'okporo ụzọ, yabụ enwere m ike ị ga-akpachara anya n'okporo ụzọ ndị ahụ ma were obere oge ka vnyagharịa dị ka edobeghị ụzọ ndị ahụ, ọkachasị n'ụtụtụ.
Na mgbede ọ bụghị n'ezie ihe ọjọọ n'ihi na ha dị mma ma na-ekpo ọkụ - dị ka isi n'okporo ámá ozugbo m rutere n'okporo ámá, mgbe gbasara
Amaghị m ịkwọ ụgbọ nkeji anọ - nke ahụ bụ ụda olu.
Aga m ahapụ nke ahụ. Nke ahụ bụ oke mkpu. Ya mere, ana m ahapụ ihe dị ka elekere asatọ nke ụtụtụ iji mee njem, na ụgbọ ala ndị ahụ adịla n'okporo ámá na ume ọkụ na-ekpo ọkụ, ụgbọ ala ahụ na-ekpo ọkụ, taya dị ọkụ, ya mere, snow na-agbaze ma eleghị anya ọ ga-abụ apịtị, mana ọ naghị amị amị.
Ọbụna n'ụbọchị oyi nke ọma, nke ahụ bụ otu n'ime ụbọchị ndị ahụ m ga-ewere Uber ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ya mere, echere m na ndị mmadụ na-eleda ịdị mfe okirikiri n'oge oyi anya, ọkachasị ma ọ bụrụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ na-akọ ugbo, nke ahụ abụghị nsogbu ma ọlị. Have ga-akpachara anya ntakịrị n’azụ okporo ụzọ. Nke ahụ dị mma.
Ma mgbe ị rutere n'okporo ụzọ, maka pasent 90 nke njem m, naanị m - ọ dịka ọ bụ oge ọkọchị! Ọ dị mma, ugbu a, m ga-ekwu maka otu ndị mmadụ si eche na ị ga-enwe ezigbo oyi mgbe ị na-agba ịnyịnya n'oge oyi. N'eziokwu, ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ. Ana m ekpo oke ọkụ oge karịa oge oyi na-atụ.
Enweela ọtụtụ oge ebe enwere m ọkụ na ụdị ọsụsọ na m ga-agagharị n'okporo ụzọ azụ wee wepụ jaket na uwe m wee gaa n'ihu n'ihi na ọ bụ naanị
Ihu igwe kwuru na ọ ga-abụ oyi ma ọ bụghị! Ọ bụ - M na-emebiga ihe ókè, ọ dị mma ịmịcha akwa n'ihi na ị nwere ike iwepụ ọkwa mgbe niile, mana ọ bụ ya mere onye ọ bụla ga - agwa gị mgbe ọ bụla - onye ọ bụla na-enyocha n'èzí n'oge oyi - ọkwa ndị ahụ dị mkpa. N'ihi na ịchọghị iyi akwa ogige ma nke ahụ bụ naanị ihe ị na-eyi n'ihi na ọ bụrụ na ị kpoo ọkụ na-arụ ọrụ ị nwere ike mepee ya echere m ma mgbe ahụ ọ na - adị jụụ - akwa bụ isi. Nwere ike idozi oyi ọ bụ na eziokwu na ọ na-aga.
Echere m na naanị ihe na-ajụ oyi: ọ bụrụ na ị kpuchidoghị ha, ntị gị na-ajụ oyi, ọbụlagodi na ị na-eyi balaclava, nke a bụ ihe na-eme: .. Enwekwara m iko na-eche nche, ma ọ bụghị na ị ga-adọka anya gị na mgbe ahụ nke ahụ bibiri mbibi.
Ndị a bụ n'ezie naanị ndị a. Ha dị ka ugogbe anya. Ndị a bụ n'ụzọ nkịtị 99 cents mgbe ebupụsịrị si ebay.
Ọ na-ewe gị ọnwa abụọ iji banye mana m ga-akwado ya. Ma obu ihe ozo - ha ekwesighi ibu enyo anya, ha gha aru oru. Ihe m na eme bu iji mmanu mmanu mmanu ebe a.
Ọ bụ aghụghọ dị egwu na ị nwere ike ịme akụkọ dum na enyo anya na otu ụzọ ga-esi nweta ntì na ha nwere ọdịiche dị n'etiti balaclava ebe a na enyo anya a nọ ebe a, yabụ mgbe ụfọdụ ebe a na ebe a ọ na-atụ oyi nke ukwuu n'ihi na nke ifufe, n'ihi na naanị * woof * Yabụ, dị ka m kwuru, mgbe ị nwere ha na nke a, gịnị na-eme mgbe ha na-atụgharị anya - nke ahụ bụ otu n'ime nsogbu m kachasị - ọ bụkwa ebe ahụ ka ị nọdụrụ mmanụ mmanụ ala. .
Na mgbe ahụ m na-ehichapụ ya mgbe m rutere n’akụkụ nke ọzọ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe nzuzu. Naanị m chọrọ ịkọwa ma gosi na ọ bụghị ihe ọjọọ na-agba ịnyịnya igwe n'oge oyi, ọkachasị n'ụbọchị ndị dị ka! Ọ bụrụ na m ga-ahụ ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ dị m ka m yi nke ukwuu mgbe m bịara ebe a.
Mgbe m bidoro ịgba ịnyịnya ígwè taa, echere m na ọ ga-ajụ ezigbo oyi ọ bụ ezie na o kwuru + 7, echere m na ọ ga-ajụ ezigbo oyi, ọ ga-amasị m ịnweta sweta wee malite ọsụsọ. Enwere m nke a na, ikekwe mgbe m na-alaghachi azụ, ọ bụrụ na ọ nwetachaa ọchịchịrị, m nwere ike iyi balaclava m. Otu ihe bụ ma ọ bụrụ na ị na-eguzo n'akụkụ okporo ụzọ na taya dara ada ịkwesịrị ijide n'aka na ị nwere uwe aka na-adịghị mma ka ị wee nwee nnukwu mittens nke m na-enweghị ebe a, nke bụ nke m ogwe aka kachasị amasị m niile Mgbe ụfọdụ n'ihi na m na-agba ịnyịnya ígwè m na ihu igwe 30, ma e wezụga na aka m dị n'ime ya na ihe ọ bụla ọzọ, enweghị uwe ime ma ọ bụ ihe ndị yiri ya, m na-eyikwa uwe m pere mpe, n'ihi na mgbe m ga-agbanwe ụlọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-atọ ọchị, ma ọ dịkarịa ala, m ka nwere ike inwe akwụkwọ ntuziaka karịa naanị mittens.
Ọ na-adịwanye ọchịchịrị ma m na-ajụ oyi n'ezie n'ihi na akwụsịrị m ịkwagharị ugbu a, yabụ m ga-alaghachi n'ụgbọ ịnyịnya ígwè m, m ga-alaghachi n'ime ime obodo iji rụọ ọrụ m, ma eleghị anya m ga-etinye nke a Ebe a ? Ozugbo m na-anya ụgbọala - ị hụrụ nke a bụ nsogbu: ị na-amalite n'ụtụtụ ị malitere ịgba ịnyịnya ígwè na mgbede ị dị ka, 'oh, ọ dị oyi!' na mgbe ahụ ị na-amalite na-agba ịnyịnya ígwè na mgbe ahụ ị kpoo ahụ ọkụ ma ị chọpụta na ọ bụ ihe nzuzu inwe ọtụtụ ọkwa nke onis na n'ikpeazụ ị chọpụta ma maka njem a, ọ bụghị m ka o doro anya na ọ ga-esi ike na-aga obodo. si north york jide n'aka na m wetakwara mgbanwe ọzọ. M ga-asị na 80% nke ụbọchị ihe kachasị mma ịme bụ ịnya igwe kwụ otu ebe ma jee ije mgbe ndị mmadụ nwere mmasị n'ihi na m na-agba ịnyịnya ígwè gaa n'ọfịs wee mzie khakis na akwa akwa. ..nke ọma, uwe elu polo Ihe ọ bụla mana anaghị m agba ịnyịnya ígwè m, ihe m na-eme bụ ịhapụ khakis na-arụ ọrụ ma otu ugboro n'izu m na-akpọlata ha n'ụlọ wee saa ha, ọ dị mma, mana ị nwere ike iyi uwe ogologo ọkpa karịa otu ụbọchị na-enweghị asacha ha m weta ọtụtụ polos dị iche iche na-arụ ọrụ nke ahụ dị mma m na-ahapụ ha na drọwa ebe m na-eyi nke ahụ bụ akwa oyi akwa nke bụ akwa na uwe ogologo ọkpa m nwere ojii T Max thermal oyi akwa si Mark's Work Wearhouse n’okpuru jeans m.
Ọfọn, ndị a abụghị akwa jeans nke m na-eyi. Ọ na-ekpo ọkụ taa, yabụ ekpebiri m iyi ezigbo jeans, ha bụ naanị mkpa, mkpa oyi akwa, mana m na-eyikarị jeans na-ekpo ọkụ. Ha nwere akwa oyi n'ime ha ma ọ dị ịtụnanya! Ana m eyi ha ọtụtụ oge oyi.
E nwere oge na October mgbe m na-asị, 'Oge eruola!' M na-etinye ha ma yikwasị ha maka ọtụtụ oge oyi ruo ụbọchị dị ka nke a mgbe m na-eyi jeans na akwa oyi akwa n'okpuru site na Mark'swork camp. Ndị a debere m - amaghị m - dị ka afọ ise / isii, yabụ ana m eji ha n'oge oyi ọ bụla. Ha dị ịtụnanya.
Oh-huh, ị nwere ike tinye ha n'okpuru jeans nkịtị, yabụ ọ bụrụ na enweghị m akwa na ikpere a, ị gaghị ama na m na-eyi ha. Oh ee, m na-amalite ịma jijiji! Echere m na anọ m ebe a maka nkeji iri abụọ na ise n'ihi na ọtụtụ mmadụ kwụsịrị, ọ na-ewe obere oge ịse foto. Anọ m na-ajụ oyi ma na-ajụ oyi karịa naanị na nkeji ise gara aga amalitere m inwe ya n'ihi na n'ụzọ nkịtị ugbu a, n'agbanyeghị na ọ bụ oge oyi, m na-eyi t-shirt dị ka nke a - wooohooo enwere m olileanya na ọ masịrị gị na Enwere m olileanya na m ghọtara na frostbiking abụghị ihe nzuzu dị ka ụfọdụ ndị nwere ike iche.
Nke a sitere na m na Toronto mgbe ịnọ na Nunavut, ikekwe nke ahụ anaghị agụta, ma eleghị anya ọ bụ ihe na-adịghị mma 60 ị ga - anwụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ụgbọ, mana na Toronto ọ nwere ike ịme ọtụtụ oge. N’ebe a kwa, ebum n’uche m bụ ịgba okirikiri ka m rụọ ọrụ kwa ụbọchị maka otu afọ. Nke a gụnyekwara oge oyi mana aga m edebe gị oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ị dị ogologo n'isiokwu ahụ ma na-ege m ntị, wee pịa bọtịnụ yiri n'ihi na o doro anya na ị nwere mmasị na edemede ahụ yana n'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a dị ka, ọ ga-amasị gị ka isiokwu ndị ọzọ niile m jiri bịa.
Ọ bụrụ na ịnwebeghị, biko denye aha ma pịa akara ngosi mkpu mgbịrịgba ka amara gị ọkwa mgbe m bulite edemede! N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, mee ka m mara na ihe ndị a n'okpuru! Aga m agbaze ebe a, ị nwere ike ile m anya. Naanị kwụọ GoPro m
Aga m etinye nke a. Oh, ana m atụ oyi nke ukwuu, achọrọ m ibuli ọnọdụ okpomọkụ m ọzọ
Kedu oyi dị oyi karịa ịnya ịnyịnya igwe?
Maka ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè,na-agba ịnyịnya ígwèna okpomọkụ ọ bụla dị n'okpuru 50 degrees Fahrenheit bụezigbo oyi. Maka kọlụm a, 'ezigbo oyi'akọwapụtara dị ka n'okpuru 32 ogo.
Ya mere, a bụ ajụjụ maka unu otú oyi dị oyi nke ukwuu n'ihi na unu na-agba ịnyịnya gị ọgba tum tum ya mere na ọ bụ ihe dị 32 degrees ihu ọma Cruising LoveWinter Chaos m hụrụ ya n'anya ị maara ihe gbara m ume bụ na ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ oku ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ụzọ ị maara 4550 50 Celsius m dị ka nwunye, nke ahụ bụ mma ihu igwe anyị ga-enwe na ihu igwe dị ka iri puku kwuru iri mana m nwere 10 ogo dị ka ngwanrọ Ndị ahụ ndị dị ka na-adịghị mma nwoke na ọ dịghị fun na ọ bụ oyi na-akpọ m bụ ngwakọta nke ihe ka chi m nwee mmeri na mbụ ịmara nke anụ ahụ, nke anụ ahụ na achọrọ m ịpụ na igwe kwụ otu ebe, ọ bụ oke ikuku nwoke na ọ bụ iji ARC nwee mwute maka ị theụ iyi niile mana ọ dị m ka ọ dị mkpa n'ihi na ndụ m Ọ fọrọ nke nta ka ọ gafere, yabụ azụ etu oyi dị oke oyi, ọ ga-akarịrị 32 n'ihi na ị na - eme ka mkpụrụ gị pụọ apụ m pụtara, agala m, emere m ihe 26 m na - aga ọtụtụ leic Slip siri ike, enwere ice ojii niile o kwesịrị ime, mana ee, ọ bụrụ na Tara dị mma, nwoke ọ bụla, achọrọ m ịnọ na ọnọdụ ihu igwe dị mma ebe a, manDC, o nwere ato uto ma udu oyi abughi nkem Favorite what a bike oh yeah okay
Kedụ ka m ga-esi jiri igwe kwụ otu ebe m ji maka oge oyi?
Ọ bụrụ na ihu igwe bụ n'ezie oyi, na ị chọrọ nwere a wicking isi oyi akwa n'okpuru gịigwe kwụ otu ebeuwe. Ma ọ dịkarịa ala, ịchọrọ uwe ọkụ, uwe ogologo uwe na-ekpo ọkụ na jaketị na-agba ịnyịnya na-enweghị mmiri.
Cycgba ígwè n’oge oyi ọ siri ike?
Azịza ha nyere gụnyere njupụta ikuku (ọ dịkarịrị ala ma mepụta nguzogide ikuku na oyi na-atụ oyi), ogige taya (taya nwere ike ịda nwayọ nwayọ mgbe ha dịoyi), na ahụ mmadụ (mọzụlụ anaghị arụ ọrụ nke ọma naoyi).
Mgbe okpomọkụ dara, metabolism gị na-ebili iji debegịna-ekpo ọkụ magịgbaa calorie karia. Otú ọ dị, ọmụmụ na-egosi naoyi- eme ka calorie-burn boost na-asacha mgbe emecharagịkpoo ahụ ma malite ịmega ahụ.Ọkt 10 2019
Nwere ike ịrịa ọrịa n’ịgba ịnyịnya ígwè n’oge oyi?
''Oyibụ ndị a na-ahụkarị naoyin'ihi naanyịwepụta oge ka ukwuu n'ime oghere ndị a na-emekọ ihe na ndị ọzọnweenje, so so out na giigwe kwụ otu ebenwereotunke kasị dịrị nchebe ebe. 'Iji-eme kaiche, influenza bụkwa ihe a na-ahụkarị naoyi, ma n'ihi ihe ndịmeena ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri.
Gịnị bụ isi nke abụba taya anyịnya igwe?
Isi uru nke aabụba igwe kwụ otu ebebụ na ha nwere ike ịgafe ebe dị iche iche, site na snow ruo aja, ka mma karịa ogeigwe. Na obosaratayanye gị ohere ijidesi ike na traction, yana ijikọta na nrụgide taya dị ala, ị ga-ahụ na ị ga-enwe ike ịzọ ụkwụ n'elu ala nke ga-eme ottayaimi.23bọchị 23 2021
Kedu ihe ị na-eyi n'okpuru okpu igwe gị igwe n'oge oyi?
Balaclava na-ekpuchi akpụkpọ ahụ ọzọ
N'ụbọchị ndị oyi na-atụ, ụbọchị mmiri na-agba agba, otú ahụ ka akpụkpọ ahụ ị nwere ike ikpuchi, ka mma. Balaclava bu okpu, ihe olu, ihe nkpuchi ihu na olu ya. Uru dị na nhọrọ nhọrọ ndị a gụnyere mkpuchi ọzọ na-enweghị ọtụtụ ihe mejupụtara ọtụtụ ngwa.Sep 24 2020
Gịnị mere o ji esi ike ịgba ígwè n’oge oyi?
Okpomọkụ nwere mmetụta dị egwu karịa na njupụta nke ikuku karịa iru mmiri:oyiikuku nwere otutu molekul kwa cubic mita. Ya mere, na aoyiụbọchị, ị ga-arụ ọrụSiri nnukwu ikeiji nọgide na-enwe otu ọsọ n'ihi na njupụta ikuku dị elu karịa na ụbọchị okpomọkụ.
Gịnị mere o ji sie ike ịgba ịnyịnya ígwè n'oge oyi?
Nke a bụ ihe na - eme mgbe ị na - apụ maka ịnya ịnyịnya naoyi. Nwere ike ịnwe ike ahụ gị na-akwado makaoyioge ị na-apụ n'ọnụ ụzọ. Ha na-eme nkwekọrịta ma na-enwe mmetụta nke siri ike karị, na-egbochi ụdị mmegharị gị, nke nwere ike ime ka ogwe ụkwụ mbụ ndị ahụ nwee mmetụta dị ukwuuSiri nnukwu ikekarịa ka ha ga-eme n'ụbọchị 70 dị mma.Sep 15 2016
Kedu nke kacha mma igwe kwụ otu ebe maka oge oyi?
Egwuregwu kacha mma maka oge oyi na-aga: Top 10 Ugboro igwe Enyi na Enyi. 1 1. Diamondback Doo anya STI-8. 2 2. Novara Ponderosa Mountain Bike. 3 3. Yeti 575 x 01 Igwe kwụ otu ebe. 4 4. Trek Farley. 5 5. Surly Pugsley. Ihe ndị ọzọ
Nwere ike iji igwe kwụ otu ebe maka njem?
Onweghi ihe na - egbochi gị iji igwe kwụ otu ebe maka njem - ma ọ bụrụ na ị bụrụlarịị ụzọ ụzọ raara onwe gị nye na - eji igwe kwụ otu ebe na ngwụsị izu na oge ezumike mgbe ahụ ọ ga - abụ ihe ezi uche dị na ya iji jiri ya mee ihe.
Kedu mgbe ị malitere ịgba ịnyịnya ígwè n'oge oyi?
Ọkachamara ndị na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ na-ahụ oge ịgba ọsọ na-amalite n'oge opupu ihe ubi, na-agwụcha na Septemba. Dika ọdịnala, a na-eji ọnwa oyi maka iwulite ntachi obi site na ogologo, nwayọ nwayọ ‘base miles’. Ndị na-amu amu na-e toomi ụdị ihe a - yabụ igwe kwụ otu ebe n'oge oyi na-enwe jịmetrị dị jụụ karị - nke a na-ahụkarị n'ọsọ egwuregwu ma ọ bụ ntachi obi.